Ethereum ကုန်သွယ်မှု - ဇွန်လ 2022 တွင် အကျိုးအမြတ်အတွက် Ethereum ကုန်သွယ်မှု2Trade ကိုလေ့လာပါ။
Ethereum ကုန်သွယ်မှု2ကုန်သွယ်မှု 2022 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
ယခု Cryptocurrencies သည် သင့်အား ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်စေမည့် အွန်လိုင်းပလပ်ဖောင်းများဖြင့် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သော နယ်ပယ်တွင် လည်ပတ်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် Bitcoin အာကာသကို လွှမ်းမိုးထားပြီး၊ Ethereum သည် စျေးကွက်အရင်းအနှီးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒုတိယအကြီးဆုံး cryptocurrency ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ Ethereum ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်ငွေအမြောက်အများနှင့်ရောင်းဝယ်မှုပမာဏ၏နေရာဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်အီတီရွန်ကို Bitcoin ကဲ့သို့သောအခြား cryptocurrencies သို့မဟုတ် USD ကဲ့သို့သော Fiat ငွေကြေးနှင့်ဆန့်ကျင်သောအရောင်းအဝယ်ရွေးချယ်မှုရှိလိမ့်မည်။
Ethereum ကုန်သွယ်မှုအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေနေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ Ethereum ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ Learn2Trade 2022 လမ်းညွှန်ကို ဖတ်ရန် သင့်အား ကြိုဆိုပါသည်။ ၎င်းအတွင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Ethereum ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ပုံ၊ သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့်အန္တရာယ်များ၊ ငွေရှာနည်း၊ မည်သည့်ပလက်ဖောင်းများတွင် ကုန်သွယ်မှုပြုသင့်သည်၊ အချို့မှာ အဘယ်အရာများအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ခြုံငုံမိပါသည်။ Ethereum စျေးနှုန်းခန့်မှန်းချက် နှင့်ပိုပြီး။
မှတ်ချက်။ အထူးသဖြင့် leverage ကိုအသုံးပြုရန် စီစဉ်နေပါက၊
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Ethereum သည်သုံးစွဲသူများအား third-party မလိုဘဲတန်ဖိုးများကိုပေးပို့ရန်နှင့်လက်ခံရန်ခွင့်ပြုထားသော blockchain စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအစား၊ အခြေခံကွန်ယက်သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပိုင်ဆိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Ethereum blockchain သည်၎င်း၏ဇာတိ cryptocurrency နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် - မဟုတ်ပါက ETH ဟုရည်ညွှန်းသည်။
Bitcoin ကဲ့သို့ပင် Ethereum သည် တကယ့်ကမ္ဘာတန်ဖိုးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်သည် US ဒေါ်လာ သို့မဟုတ် ဗြိတိန်ပေါင်ကဲ့သို့သော fiat ငွေကြေးများဖြင့် သင်၏ Ethereum တိုကင်များကို လဲလှယ်နိုင်သည်။ သင်၏ ETH ကို သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက်၊ သင်သည် ဒက်စ်တော့ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် သီးသန့်ပိုက်ဆံအိတ်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင်သည် သင်၏ Ethereum တိုကင်များကို 16 စက္ကန့်မျှသာကြာသော ငွေပေးငွေယူဖြင့် အခြားအသုံးပြုသူထံ ပေးပို့နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
Ethereum သည် cryptocurrency လုပ်ငန်းသို့ 'smart contract' ကိုယူဆောင်လာသည့်ပထမဆုံးသော blockchain စီမံကိန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းလူသိများသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအားယုံကြည်မှုမရှိသောသဘောတူညီမှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အခြေခံသဘောတူစာချုပ်သည်တင်းကျပ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသောကုဒ်နံပါတ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
Ethereum Trading ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
Ethereum သည် ၎င်း၏ နို့စို့အရွယ်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည် - နှစ်သက်ဖွယ်စျေးနှုန်းဖြင့် စျေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ရန် အခွင့်အရေးရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
သင်သည် အခြားသော cryptocurrencies များနှင့် Ethereum ကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ပါသည်။
Ethereum သည် USD နှင့် GBP ကဲ့သို့သော fiat ငွေကြေးများနှင့်လည်း ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
Ethereum ကို လွှမ်းမိုးမှုဖြင့် ရောင်းဝယ်ပါ သို့မဟုတ် fiat ငွေကြေးဖြင့် အတိုချုံးရောင်းပါ။
Ethereum အရောင်းအ၀ယ်ဆိုက်များ- အချို့ကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ် သို့မဟုတ် အီး-ပိုက်ဆံအိတ်ဖြင့် အလွယ်တကူ စတင်လိုက်ပါ။
cryptocurrencies အားလုံးကဲ့သို့ပင် Ethereum သည် အလွန်မှန်းဆနိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ မသိရင် ပိုက်ဆံအများကြီး ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။
Bitcoin သည် Ethereum ထက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အများအပြားရှိသည်။
Ethereum ထရေးဒင်း: အခြေခံ
Ethereum blockchain ကိုထောက်ပံ့သောအခြေခံနည်းပညာသည်တော်လှန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်မလုံလောက်သော်လည်း ETH ကို ၀ ယ်သည့်လူအများစုတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယန္တရားအဖြစ်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Ethereum ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုရန်နှင့်အတူ ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာအနာဂတ်တွင်၎င်းတို့ပေးသည့်စျေးထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Ethereum ၏ကာလတိုကုန်သွယ်မှုတွင်ပါဝင်လိုကြသည်။ Ethereum ကိုအခြားငွေကြေးနှင့်သင်ရောင်းဝယ်သောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Bitcoin သို့မဟုတ် Ripple ကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာ cryptocurrency သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကဲ့သို့သော real-world ငွေကြေးဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရည်မှန်းချက်မှာငွေကြေးနှစ်ခုအကြားငွေလဲနှုန်းလှုပ်ရှားမှုမှအမြတ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာ Ethereum ဖြစ်သည်။
Forex ကဲ့သို့ပင် Ethereum အရောင်းအဝယ်သည် 'အတွဲများ' ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဥပမာ BTC / ETH ကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းသည် Bitcoin နှင့် Ethereum အကြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုသင်မှန်းဆနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အလားတူစွာ ETH / USD အရောင်းအ ၀ ယ်အနေဖြင့်၊ သင်သည် Ethereum နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအကြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုမှန်းဆနေကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့ ETH / USD သည်လက်ရှိတွင် ၂၁၃.၄၅ စျေးနှုန်းရှိသည်ဟုပြောကြပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာ 213.45 သင့်တွင်ရှိသည့် Ethereum တိုကင်တစ်ခုအတွက် ၀ ယ်သူသည်ဒေါ်လာ ၂၁၃.၄၅ ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဤငွေလဲနှုန်းသည်ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ရွေ့လျားသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အမြတ်ရရန်အတွက်ရေတိုတွင်မည်သည့်လမ်းကိုသွားမည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်သင်သည်ဝယ်ရန်အမှာစာ (သို့) ရောင်းအမှာစာကိုတင်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုသွားလိမ့်မည်ဟုထင်လျှင် up, ထို့နောက်သင်သည်လက်ဝဲဘက်ခြမ်းရှိငွေ၏လက်ဝဲဖက်ရှိငွေကြေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုးပွားလာသည်ဟုခန့်မှန်းတွက်ချက်နေကြသည်။
ဒီဥပမာမှာဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ငွေကြေးဟာ Ethereum ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တိုးလာမယ်လို့သင်ထင်တယ်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်ငွေလဲနှုန်းတက်လိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည် ETH / USD တွင် ၀ ယ်သူအမှာစာကို ၂၁၃.၄၅ တွင်ဖွင့်ပြီး ၂၁၉.၀၆ တွင်ပိတ်လိုက်လျှင်၎င်းသည်အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုဖြစ်သည်။
ဒီဥပမာမှာ၊ ဆိုလိုတာကအမေရိကန်ဒေါ်လာဟာ Ethereum နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တန်ဖိုးပိုများလာလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်တယ်၊
ဥပမာသင်သည် အကယ်၍ သင်သည် ETH / USD ဖြင့်ရောင်းချမှုအမှာစာကို ၂၁၃.၄၅ တွင်ဖွင့်ပြီး ၂၀၁၁.၉၆ တွင်ပိတ်လိုက်ပါက၎င်းသည်အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
အမိန့်များကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအပေါ်သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုလှည့်ပတ်ခြင်းကပထမတစ်ချက်တွင်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဥပမာနှစ်ခုကိုကြည့်ကြစို့။
✔️ Ethereum-to-Fiat ကုန်သွယ်မှုဥပမာ
အခိုးအငွေ့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက် Ethereum-to-fiat ကုန်သွယ်မှုသည်မည်သို့မည်ပုံကြည့်ရအောင်ကြည့်ကြပါစို့။
သင်သည် ETH/USD အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေပါသည်။
အတွဲ၏ လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာ 210.50 ဖြစ်သည်။
Ethereum ဟာစျေးသိပ်မကြီးဘူးလို့သင်ထင်တယ်၊ ဆိုလိုတာကငွေလဲနှုန်းကတက်သွားလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် $1,000 ဖြင့် အစုရှယ်ယာတစ်ခုတွင် ဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ပါ။
နောက်ပိုင်းတွင် ETH/USD သည် 215.30 သို့ တိုးလာသည်။
သင်သည် ယခုအမြတ်ငွေ 2.28% ဖြစ်သောကြောင့်၊ အရောင်းအမှာစာတင်ခြင်းဖြင့် သင့်ရာထူးမှထွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အထက်ပါအချက်များအရကြည့်လျှင် ETH / USD ဖြင့်ရေတိုကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်ပါသည်။ အစုရှယ်ယာ ၁၀၀၀ တွင်မင်း၏အမြတ် ၂.၂၈% သည်သင့်အားစုစုပေါင်းအမြတ် $ 1,000 ရရှိသည်။
✔️ Ethereum-to-Crypto ကုန်သွယ်မှုဥပမာ
Ethereum-to-crypto pair တစုံဆိုသည်မှာသင်သည် Ethereum ကိုအခြား cryptocurrency နှင့်ဆန့်ကျင်ရောင်းဝယ်နေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒီအတွဲဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာလိုတကယ့်ကမ္ဘာ့ငွေကြေးနဲ့ဈေးနှုန်းမကျတဲ့အတွက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်။ အဲဒီအစား, ဒီစုံတွဲ cryptocurrencies အတွက်သက်သက်သာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
Forex အာကာသကဲ့သို့ပင်လဲလှယ်ပိုင်ခွင့်ကိုညာဘက်ရှိငွေကြေးဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ဥပမာ GBP / USD ကို ၁.၂၅ နဲ့ရောင်းချမယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာကဗြိတိသျှပေါင်တစ်ဒေါ်လာကိုဒေါ်လာ ၁.၂၅ ရတယ်။ BTC / ETH ကို ၄၁.၁၃ နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင် Bitcoin ၁ ခုတိုင်းအတွက် 1.25 Ethereum ကိုရမယ်။
သင်သည် BTC/ETH ဖြင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်နေပါသည်။
အတွဲ၏ လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာ 41.13 ဖြစ်သည်။
Bitcoin သည် စျေးပိုကြီးသည်ဟု သင်ထင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ငွေလဲနှုန်းကျသွားသည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် $2,000 ဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် BTC/ETH သည် 35.90 သို့ ကျဆင်းသွားသည်။
သင်သည် ယခု 12.71% အမြတ်ရနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ရာထူးမှထွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အထက်ပါအချက်များအတိုင်းသင် BTC / ETH ကိုကာလတိုကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစုရှယ်ယာဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ တွင်သင်၏အမြတ် ၁၂.၇၁% သည်သင့်အားစုစုပေါင်းအမြတ် $ 2,000 ရရှိသည်။
Ethereum အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ၊ ဤအရာအများစုသည် ပိုင်ဆိုင်မှု၏အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဤသဘောအရ၊ သင့်တွင် ရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုရှိသည် - cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင် ရောင်းဝယ်ခြင်း သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းတစ်ခုတွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ CFD ပွဲစား။
Cryptocurrency ချိန်းမှာ Ethereum အရောင်းအဝယ်ဖြစ်.
တိုကင်ကုန်သွယ်မှုအတွက်တိုကင်များကိုရောင်းဝယ်ရန်အတွက်သင်၏အကောင့်ကို Ethereum ကဲ့သို့သောဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြင့်ရန်ပုံငွေလိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်ရာပေါင်းများစွာသော Bitcoin၊ Ripple, Bitcoin Cash, EOS သို့မဟုတ် Stellar ကဲ့သို့သောအခြားဒင်္ဂါးများစွာနှင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ သင်၏အမြတ်အစွန်းများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်အခါ cryptocurrencies တွင်အရာအားလုံးကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
ယခုသင်သည် Ethereum ကို USD ကဲ့သို့သောတကယ့်ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဖြင့်ကုန်သွယ်လိုပါက cryptocurrency လဲလှယ်သည့်အခါ၎င်းသည်အနည်းငယ်ပြmoreနာဖြစ်လာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပလက်ဖောင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသိုလှောင်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုထိန်းညှိထားခြင်းမရှိရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ များစွာသောအမှုများတွင်အမျိုးသားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် cryptocurrency ဖလှယ်ရေးအတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သငျသညျ USD ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ cryptocurrency - ထိုကဲ့သို့သော Tether ကဲ့သို့သင်၏ Ethereum ကုန်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်စည်းမျဉ်းမရှိသော cryptocurrency ဖလှယ်မှုသည်ငွေသားပုံစံဖြင့်အပ်ငွေများကိုလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့်သင်ငွေမရနိုင်ပါ။
Ethereum တစ် CFD ပွဲစားမှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်
Ethereum အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းကိုသင်ရှာဖွေရာတွင် CFD ပွဲစားတစ် ဦး ၏ကောင်းကျိုးများကိုစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ ပထမနှင့်အဓိကအချက်အနေဖြင့် CFD ပွဲစားများကိုထိန်းညှိရမည်။ ပလက်ဖောင်းများကို Tier-one body မှလိုင်စင်ချသောအခါ FCA, ASICဒါမှမဟုတ် CySEC - အကာအကွယ်အမျိုးမျိုးမှ သင်အကျိုးခံစားရလိမ့်မည်။
၎င်းတွင် ဖောက်သည်ငွေများကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စာရင်းများတွင် သီးခြားဘဏ်စာရင်းတွင် ထားရှိရန် လိုအပ်ချက်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ အလားတူ၊ ထိန်းညှိထားသော cryptocurrency CFD ပွဲစားများသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြင့် အပ်ငွေများနှင့် ငွေထုတ်မှုများကို လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်၊ ဘဏ်အကောင့် သို့မဟုတ် PayPal ကဲ့သို့ အီး-ပိုက်ဆံအိတ်မှတစ်ဆင့် ပလပ်ဖောင်းသို့ အလွယ်တကူ ငွေရနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
Ethereum CFDs များကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် အရင်းခံကိရိယာကို သင်ပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်ဟု ဆိုလိုသည်။ သို့သော်၊ ဒါတကယ်အရေးကြီးသလား။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ သင်သည် Ethereum ကို အခြားသော cryptocurrencies များနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေရဆဲဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် သင်သည် ETH/USD ကဲ့သို့သော crypto-to-fiat အတွဲများသို့လည်း ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နောက်အပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ထုတ်လာသည်နှင့်အမျှ သင်သည် USD နှင့် Ethereum နှင့် အကျုံးဝင်သော အကျုံးဝင်မှုနှင့် အတိုချုံးရောင်းချမှုတို့ကို အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Leverage နှင့် Short-Selling
ရိုးရာ cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းကို သင်အသုံးပြုသောအခါတွင်၊ နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့် ရံပုံငွေများကို ငွေသွင်းရန် အခက်အခဲရှိရုံသာမက ပိုမိုခေတ်မီသော တူရိယာများကို အသုံးပြုခွင့်ရရန်လည်း ရုန်းကန်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ BitMEX ၏အကြိုက်များသည် crypto-derivatives များကိုပေးဆောင်သည်၊ သို့သော်ပလပ်ဖောင်းသည်ထိန်းချုပ်မှုမဲ့ပုံစံဖြင့်လုပ်ဆောင်နေပြီး Seychelles တွင် 'ဗျူဟာမြောက်' အခြေစိုက်ထားသည်။
ထိုကဲ့သို့သော Ethereum ကိုသြဇာသက်ရောက်ရန်နှင့်ရောင်းရန်တိုကိုရွေးချယ်လိုပါက CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအကောင်းဆုံးအကြံပေးသည်။
Leverage သည် သင့်အကောင့်တွင်ရှိသည်ထက် ငွေပို၍ကုန်သွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အမြတ်ငွေများကို ချဲ့ထွင်နိုင်စေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်အမြတ်များကို သင်ရွေးချယ်ထားသော leverage အချိုးဖြင့် မြှောက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ETH/USD တွင် $1,000 တန်သည့် ၀ယ်လိုအားကို 5x ဖြင့် တင်ပါက၊ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးမှာ $5,000 ဖြစ်လိမ့်မည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာတစ်ခုဖြင့် Ethereum ကုန်သွယ်မှုသည်မည်သို့မည်ပုံအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်
1,000 တွင် သင်သည် $202.50 ၀ယ်ရန်အမှာစာတင်ထားသည်။
သင်သည် 10x ၏ leverage ကိုသုံးပါ။
နောက်ပိုင်းတွင် ETH/USD သည် 208.40 သို့ တိုးလာသည်။
၎င်းသည် အမြတ် 2.91% ဖြင့် အလုပ်လုပ်သောကြောင့် အမြတ်အစွန်းအတွက် ကုန်သွယ်မှုကို ပိတ်ရန် သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သာမာန်အားဖြင့်သင်၏ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ သည် ၂.၉၁% ရှိသောရှယ်ယာသည်စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေဒေါ်လာ ၂၉.၁၀ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင် မူတည်၍ အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းကို ၁၀x နှုန်းဖြင့်လျှောက်ထားပါက၎င်းသည်သင်၏စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေကိုဒေါ်လာ ၂၉၀.၀၀ အထိချဲ့နိုင်သည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် Ethereum ကိုသြဇာသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းသည်အလွန်အန္တရာယ်များနိုင်သည်။ အနားသတ်သည်သင်၏သြဇာကိုအသုံးပြုသည့်အခါပွဲစားကသင့်အားလိုအပ်သောအပ်ငွေတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၄၀၀ လက်ကျန်တွင် 4x သြဇာကိုအသုံးပြုပါကသင်သည်ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဖြင့်အရောင်းအဝယ်ပြုသည်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကဒေါ်လာ ၄၀၀ ရဲ့ ၁/၄ ဖြစ်လို့ဆိုလိုတာကခင်ဗျားရဲ့ margin က ၂၅% ။
အောက်ဖော်ပြပါဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏ပမာဏအတိုင်းအတာနှင့်ဆန့်ကျင်လျှင်သင်၏ margin အပ်ငွေကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။
သင်သည် 41.50 တွင်ရောင်းရန်အမှာစာတင်ခဲ့သည်။
သင်သည် 4x ၏ leverage ကိုအသုံးပြုပြီး သင်၏အနားသတ်သည် $250 (25%) ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် $1,000 ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်။
BTC/ETH ၏စျေးနှုန်းသည် 25% (31.12) ကျသွားပါက၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာကုန်သွယ်မှုသည်အလိုအလျောက်ပိတ်ပြီးပွဲစားသည်သင်၏အနားယူမှုကိုဆိုလိုသည်။ ဒီဥပမာမှာ, margin က $ 250 ပမာဏ။
ဖျက်သိမ်းခံရခြင်းကိုသင်ရှောင်ရှားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသင်၏ Ethereum ကုန်သွယ်မှုအနားသတ်အကောင့်ထဲသို့ပိုက်ဆံပိုမိုထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကိစ္စရပ်အများစုတွင်သင့်အနေဖြင့်ဖျက်သိမ်းမည့်နေရာသို့ရောက်သည့်အခါသင့်ကိုသင်၏ငွေလက်ကျန်တိုးမြှင့်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းပေးသောပွဲစားသည်သင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသော CFD ပွဲစားများသည် Ethereum ကဲ့သို့သော cryptocurrencies ကိုလွယ်ကူစွာတိုတောင်းနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ရင် Ethereum ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ကျသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသင်မှန်းဆနေတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်သင်အမြတ်ရလိမ့်မည်။
Ethereum ၏စျေးနှုန်းသည် $ 240.00 ဖြစ်သည်။
သင်သည် ပရောဂျက်အပေါ် အလွန်အမင်း ကျဆင်းနေသောကြောင့် ETH/USD ဖြင့် ရောင်းရန်အမှာစာတင်ရန် သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သင်၏စုစုပေါင်းရှယ်ယာသည် $2,000 ဖြစ်သည်။
ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ Ethereum သည် $190.00 ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် USD နှင့် 20% နီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်၏အမြတ်ငွေကို ငွေရှင်းရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Ethereum အားဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ၏စုစုပေါင်းရှယ်ယာဖြင့်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀% ဆုံးရှုံးမှုသည်သင့်အားအမြတ်ငွေဒေါ်လာ ၄၀၀ ရရှိစေသည်။
Ethereum ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်တစ်စုံတစ်ရာသောအခကြေးငွေကိုအမြဲတစေကောက်ခံလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီသင်မည်မျှပေးရမည်ကိုသင်နားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တိကျသောစျေးနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံသည်ပွဲစားမှပွဲစားနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သတိထားရမည့်အဓိကအခကြေးငွေများကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည်။
🥇 ငွေသွင်း / ထုတ်ယူခ
အချို့သော Ethereum ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်စင်မြင့်ထဲမှ ၀ င်ငွေထွက်ငွေရရန်သင့်အားအခကြေးငွေပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Coinbase အကြိုက်များသည် debit သို့မဟုတ် credit card ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ၃.၉၉% ပေးသည်။
ဒီဟာဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အပ်ငွေအတွက်ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ ပေးရမယ်။ ၎င်းသည် eToro ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်။ သင့်အားရန်ပုံငွေများကိုအခမဲ့သွင်းနိုင်သည်။
အလားတူစွာအချို့သော Ethereum ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်သင့်အားငွေထုတ်ယူခကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီစစ်ဆေးပါ။
Ethereum ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတော်တော်များများကသင့်ကိုကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကငွေပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့ဖွင့်လိုက်ရင်၊ သင်ဖွင့်တိုင်းတိုင်းဒီကိုကျသင့်မှာပါ နှင့် အနေအထားကိုပိတ်လိုက်ပါ ဥပမာအားဖြင့်၊ Coinbase သည်စုစုပေါင်းအမှာစာပမာဏအပေါ်ကော်မရှင် ၁.၅% ကောက်ခံသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ Ethereum မှ ၀ ယ်ရန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ သည်သင်ကို ၇.၅ ဒေါ်လာကုန်ကျမည်ဟုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ Ethereum ကိုဒေါ်လာ ၈၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့်အခါရောင်းခဲ့လျှင်၊ ရာထူးကိုပိတ်လိုက်သောအခါသင့်အတွက်ကော်မရှင်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၂ ကုန်ကျမည်။
အဆိုပါ ပျံ့နှံ့ သင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်အခြားကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအခကြေးငွေဖြစ်သည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်၎င်းသည်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကွာခြားမှုဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားကွာဟမှုသည်ပွဲစားများနှင့်ဖလှယ်မှုများသည်အမြဲတမ်းအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်သေချာသည်။ စျေးကွက်မည်သည့်လမ်းကိုသွားသည်ဖြစ်စေ၊
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည် ETH / USD အရောင်းအ ၀ ယ်ရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။ အကယ်၍ ၀ ယ်လိုသောစျေးသည်ဒေါ်လာ ၂၀၃ ဖြစ်ပါကရောင်းဈေးမှာဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖြစ်လျှင်၎င်းသည် ၁.၄၇% ကွာခြားမှုရှိသည်။ Layman ၏ဝေါဟာရများအရဆိုလျှင်သင်သည်ပင်ချိုးဖောက်ခြင်းကိုသာပြုလုပ်ရန် ၁.၄၇% ရရှိရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစားသည်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကိုငွေထပ်မံကောက်ခံပါကပြန့်ပွားမှုကိုဖုံးကွယ်ရန် ပို၍ ပင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ညတည်းငွေကြေးအခကြေးငွေသည် Ethereum ကုန်သွယ်ရေး site သို့မ ၀ င်မီအကဲဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်ကပစ္စည်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်း (သို့) ရောင်းခြင်းတိုကိုလုပ်သည့်အခါပွဲစားမှငွေပေးချေသည်။ သင်ကပွဲစားတစ်ယောက်ဆီကရန်ပုံငွေတွေကိုနည်းပညာအရချေးယူလိုက်တာနဲ့အတိုးနှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကဒေါ်လာ (၁၀,၀၀၀) တန်အားဖြင့်မြှုပ်နှံထားသောရန်ပုံငွေများကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်နေပြီးညအိပ်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုကြေးသည် ၀.၀၅% ဖြစ်ပါကသင်၏အနေအထားကိုပွင့်လင်းစွာထားရှိရန်အတွက်နေ့စဉ် ၅ ဒေါ်လာပေးရလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်တိုတောင်းသောသက်တမ်းကုန်သွယ်မှုကိုလုပ်လိုလျှင်၊ အခကြေးငွေများသည်တစ်မိနစ်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။
စျေးကွက်များမည်သည့်လမ်းဖြင့်သွားမည်ကိုခန့်မှန်းရန်အတွက်သုတေသနကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်မလုပ်ခဲ့လျှင်၊ Ethereum ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေတွင်သုတေသန၏အဓိကပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည် - နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဇယားများဖတ်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများကိုကြည့်ပြီးလက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်နေသည် စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု ထိုစုံတွဲ၏။ လပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ် နှစ်ပေါင်း အပြည့်အဝနားလည်ရန်ဇယားများ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုလေ့လာရာတွင်တတ်နိုင်သမျှအချိန်ကိုအသုံးပြုရန်လိုသည်။
လမ်းတစ်လျှောက်တွင် သင့်အား ကူညီရန်၊ ကျွမ်းကျင်သော ကုန်သည်များသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဤအရာများသည် သင်ရွေးချယ်ထားသောအတွဲ၏ လက်ရှိရေစီးကြောင်းအကြောင်း အချက်အလက်များကို သင့်အားပေးသည့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် RSI၊ Bollinger Bands နှင့် MACD ၏အကြိုက်များပါဝင်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများသည် ကုန်သွယ်မှုပမာဏများ၊ ပံ့ပိုးမှုနှင့် ခုခံမှုလိုင်းများ၊ မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု အဝယ်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းလွန်ခြင်းကဲ့သို့သော တိုင်းတာမှုအကွာအဝေးကို ကြည့်ရှုသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဌာန၏အဓိကတိုတောင်းသောအချက်မှာ cryptocurrency signal service ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာနည်းပညာညွှန်းကိန်းသည်ကုန်သွယ်မှုအလားအလာကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အခါသင်အချိန်နှင့်တပြေးညီသတိပေးချက်များကိုရရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Learn2Trade ၏အလိုအလျောက်အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုသည်သင့်အားတိကျသောကုန်သွယ်မှုအတွဲ (ဥပမာ ETH / USD)၊ ဖော်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်သောအချက်ပြနှင့်ထားရှိရန်လိုအပ်သည့်ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်အမိန့်များကိုပေးလိမ့်မည်။
အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် စျေးနှုန်းဇယား သို့မဟုတ် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ဂရုမစိုက်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ၎င်းသည် ကုန်သွယ်မှုအတွဲတစ်ခု၏ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် တကယ့်ကမ္ဘာ့သတင်းဖြစ်ရပ်များအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Ethereum သည် အဓိက blue-chip ကုမ္ပဏီနှင့် မိတ်ဖက်ဖွဲ့ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြပါစို့။
ဤသည်မှာစီမံကိန်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောသတင်းဖြစ်သဖြင့် ETH စျေးနှုန်းသည်ပွင့်လင်းသောစျေးကွက်တွင်မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိသည်။ အလားတူစွာပင် SEC သည် Ethereum အနာဂတ်စျေးကွက်ကိုအတည်ပြုပါက၎င်းသည် ETH စျေးနှုန်းကိုအပြုသဘောသက်ရောက်လိမ့်မည်။
အရေးကြီးသည်မှာအခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းထက်နားလည်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ အများအားဖြင့်ကိစ္စရပ်များတွင်သတင်းသည်အပြုသဘောရှိ၊
သင် Ethereum နှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆို သင်အွန်လိုင်းပွဲစားနှင့် မှာယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပလက်ဖောင်းသည် သင်အောင်မြင်ရန် နှစ်သက်သည်ကို သိရှိရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့် မက်ထရစ်များစွာရှိပါသည်။
မှာယူမှု / ရောင်းရန်: ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်သင်ဝယ်ယူမှုအမှာစာကိုရောင်းလိုသည်ဖြစ်စေရောင်းချရန်မှာလိုသည်ရှိမရှိသင်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ငွေကြေးအတွဲတန်ဖိုးတိုးလာမည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ ဝယ်ရန်အမှာစာကိုရွေးချယ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်ထိုစုံတွဲသည်တန်ဖိုးကျမည်ဟုထင်လျှင်ရောင်းရန်အမှာစာချပါ။
လောင်းကြေး: ထို့နောက်ကုန်သွယ်ရေးတွင်သင်စွန့်စားလိုသည့်စုစုပေါင်းပမာဏကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာသင်သည် BTC / ETH ၀ ယ်ရန်အမိန့်ဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ရောင်းလိုပါကသက်ဆိုင်ရာအကွက်ထဲသို့ဒေါ်လာ ၅၀၀ ထည့်ပါ။
အကန့်အသတ်ဖြင့်: အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ၀ ယ်လိုပါကစျေးကွက်ထဲ ၀ င်လိုသည့်အတိအကျစျေးနှုန်းကိုသင်သတ်မှတ်ရလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့ ETH / USD သည် ၂၀၆.၂၃ ဖြင့်စျေးနှုန်းရှိသော်လည်းစျေးနှုန်းမှာ ၂၀၄.၀၀ အထိကျသွားပါကသင်ဝယ်ယူရန်မှာကြားလိုပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်သင်၏ခရက်ဒစ်သည် ၂၀၄.၀၀ မပြည့်မှီအထိမပြီးနိုင်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကသင်ဖျက်သိမ်းသည်အထိအမိန့်သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်။
စျေးကွက်အမှာ တနည်းအားဖြင့်စျေးကွက်အမှာစာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်ရရှိနိုင်သောနောက်စျေးကိုရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးထက်နိမ့်ကျနေဖွယ်ရှိသည်။
သြဇာ: သင်၏ Ethereum ကုန်သွယ်မှု၌သြဇာသက်ရောက်လိုပါကသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်လျှောက်ထားလိုသောအချိုးကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်သင်၏စုစုပေါင်းမှာယူမှုအရွယ်အစားသည်အသစ်ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကိုသင်၏အစုရှယ်ယာအဖြစ်ထည့်ပြီး ၅ ဆလီဗာကိုရွေးချယ်ပါကသင်ဝယ်ယူမှုမှာဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ဖြစ်သည်။
ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှု: Ethereum ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်တဲ့အခါမှာသင်အမြဲရပ်နားသင့်ပါတယ်။ ဤအချက်သည်စျေးကွက်များကသင့်အားဆန့်ကျင်နေပါကသင်၏အန္တရာယ်များကိုလျော့ပါးစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ stop-loss ကို ETH / USD ကို ၂၀၂.၁၂ တွင်သတ်မှတ်ပြီးစျေးကိုအစပျိုးလျှင်၊ သင်၏အမှာစာကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
အမြတ်အစွန်း - အမြတ်အစွန်းများကိုရယူခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းများကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ ETH / USD ကိုယူပါကအမြတ်အစွန်း ၂၁၀.၀၀ ကိုသတ်မှတ်ပြီးစျေးကိုအစပျိုးလျှင်၊ ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိမ့်မည်။
Ethereum ကိုအွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်၊ အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းကိုသင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော cryptocurrency ဖလှယ်မှုနှင့်အွန်လိုင်းပွဲစားများယခုအာကာသတွင်တက်ကြွစွာနှင့်အတူ, မည်သည့် site ကိုနှင့်အတူဆိုင်းအင်လုပ်ရန်သိရန်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Ethereum ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များကိုထိန်းညှိရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ FCA, CySEC နှင့် ASIC စသည့်အဖွဲ့များကလိုင်စင်ရသည့်ပလက်ဖောင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အကြောင်းမှာသင်သည်သီးခြားဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးမှုများစွာမှအကျိုးကျေးဇူးခံစားရလိမ့်မည်။
သင်မသတ်မှတ်ထားသော cryptocurrency လဲလှယ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်၏ရန်ပုံငွေများသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အကယ်၍ သင့်အနေနှင့်မေးခွန်းတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာပါကသင်၏ဒင်္ဂါးပြားခိုးယူခံရနိုင်သည်။ ဤသည်မှာအာကာသအတွင်း၌အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် အမြဲ တစ် ဦး စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Ethereum ကုန်သွယ် site ကိုရွေးချယ်ပါ။
သငျသညျ ထို့နောက် Ethereum ကုန်သွယ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ရန်ပုံငွေများရရှိရန်သင်မည်သို့ရည်ရွယ်သည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ထပ်မံ၍ cryptocurrency ဖလှယ်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးများဖြင့်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ခြင်းများကိုသာပံ့ပိုးသည်။ ဆန့်ကျင်စွာအားဖြင့် CFD ပွဲစားများသည်နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံကြသည်။
၎င်းတွင် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်၊ ဘဏ်အကောင့်နှင့် PayPal၊ Neteller နှင့် Skrill ကဲ့သို့သော အီး-ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခု ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ဘေးထွက်မှတ်စုအနေဖြင့်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသော Ethereum ကုန်သွယ်မှုဆိုက်တွင် အနိမ့်ဆုံးအပ်ငွေပမာဏသည် မည်မျှရှိသည်ကို ကြည့်ရှုရန်လည်း စစ်ဆေးသင့်သည်။
Ethereum ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များအားလုံးသည်အခကြေးငွေပေးရသည်။ ထို့ကြောင့်စာရင်းမ ၀ င်ခင်သင်မည်မျှပေးရမည်ကိုအကဲဖြတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤပမာဏသည်ငွေသွင်း / ထုတ်ယူခ၊ ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်၊ ညအိပ်ငွေကြေးနှင့်ပြန့်ပွားမှုတို့မှအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးသောကမ္ဘာတွင်သင်သည်ကော်မရှင်မပါသောအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများကိုပေးသောပွဲစားကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
🥇 ထောကျပံ့ Pairs
Ethereum ကိုမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်လဲလှယ်နိုင်သည်ကိုသင်လေ့လာသင့်သည်။ သင် Ethereum ကိုငွေကြေးနှင့်ဆန့်ကျင်ရောင်းဝယ်လိုလျှင် ETH / USD နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအခြားငွေကြေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကြီးမားသောကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်ငွေဖြစ်လွယ်မှုမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်။
အခြား cryptocurrencies နှင့် Ethereum ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ၊ ပွဲစားမှပံ့ပိုးသောဒင်္ဂါးပြားများကိုကြည့်ရှုရန်စစ်ဆေးပါ။ ပွဲစားအများစုသည် Bitcoin၊ Ripple နှင့် Bitcoin Cash ကဲ့သို့သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း Ethereum နှင့် Ethereum တို့ကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိုသည့်အချိန်တစ်ခုရှိလာနိုင်သည်။
🥇 သုတေသန Tools များ
သငျသညျသုတေသန tools များ၏အမှိုက်ပုံမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသော Ethereum ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုချင်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင်ဇယားဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများစွာအပြင်လက်တွေ့ကျသောအခြေခံသဘောတရားများကိုဖတ်ရှုခြင်းတို့ပါ ၀ င်သင့်သည်။ Ethereum အရောင်းအ ၀ ယ် site သည်ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကမ်းလှမ်းလျှင်၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဟာစွန့်စားရမှုအတွက်ပိုမိုလိုချင်တောင့်တနေလျှင်၊ သြဇာသက်ရောက်နိုင်သောအွန်လိုင်းပွဲစားကိုသင်ရွေးချယ်ချင်လိမ့်မည်။ သတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များကိုပွဲစားမှသာမကသင်၏တည်နေရာကိုပါဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကဗြိတိန် (သို့) ဥရောပသမဂ္ဂမှာအခြေစိုက်တယ်ဆိုရင် Ethereum ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ချိန်မှာ 2x လောက်ရှိမယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောလဲလှယ်မှုဖြင့်သင်ပိုမိုသိသိသာသာရနိုင်သော်လည်းသင်၏ရန်ပုံငွေများမှာအန္တရာယ်ရှိပါသည်။
Ethereum ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်ကမည်သည့်ဖောက်သည်များပံ့ပိုးပေးသောလမ်းကြောင်းများကမ်းလှမ်းသည်ကိုလည်းသင်လေ့လာသင့်သည်။ အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားရွေးချယ်စရာများမှာအီးမေးလ်၊ မကြာခဏဖြစ်သည့်တယ်လီဖုန်းအထောက်အပံ့တို့ပါ ၀ င်သည်။
2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး Ethereum ကုန်သွယ်မှုဆိုက်နှင့် ပလပ်ဖောင်း
Ethereum ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရန် အချိန်မရှိပါသလား။ အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ 2022 ခုနှစ်၏ ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဆိုက်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ပလပ်ဖောင်းသည် ပြင်းထန်စွာ ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ သင့်အား ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်ဖြင့် ရံပုံငွေများအပ်နှံနိုင်စေကာ Ethereum ကုန်သွယ်မှုအတွဲများကို အစုအဝေးကို ပေးဆောင်နိုင်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်၊ Ethereum ကုန်သွယ်မှုဆိုက်များသည် သင့်အား cryptocurrencies များကို လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်စေပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် forex trading နှင့် များစွာအတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၊ အတွဲများ၏ ငွေလဲနှုန်းကို ကြိုက်သည်ရှိမရှိ ခန့်မှန်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ETH / အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှင့် BTC / ETH တက်သည်ဖြစ်စေ၊
စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသော cryptocurrency ဖလှယ်မှုများကလွှမ်းမိုးထားသော်လည်းကောင်းမွန်သောသတင်းမှာ Ethereum ကိုလိုင်စင်ရ CFD ပွဲစားများတွင်သင်ရောင်းဝယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် FCA, CySEC နှင့် ASIC တို့ကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကာအကွယ်များမှသင်အကျိုးရရုံသာမကနေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့်ရန်ပုံငွေများကိုငွေစု။ ထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Etereum ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုအကြီးအကျယ်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
Ethereum ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာကဲ့သို့သောငွေကြေးများဖြင့်သင်လဲလှယ်နိုင်သည်။ Etcoinum ကို Bitcoin, EOS, Ripple နှင့် Binance Coin ကဲ့သို့သောအခြား cryptocurrencies နှင့်လည်းလဲလှယ်နိုင်သည်။
ငါ Ethereum သြဇာနှင့်ကုန်သွယ်နိုင်သလား?
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင် Ethereum ကိုသြဇာနဲ့ကုန်သွယ်နိုင်တယ်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသော CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုပါကလက်လီကုန်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်မည်မျှသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ယူကေနှင့်ဥရောပမှာ ၂ ဆရှိတယ်။ သင်မထိန်းချုပ်ထားသောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုသင်အသုံးပြုပါကသင်သည် ၁၀၀x ပိုလျှံစွာရရှိလိမ့်မည်။
ဒီပွဲစားအပေါ်မူတည်။ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း Ethreum ကုန်သွယ်ရေးဆိုက် Crypto Rocket ကိုအသုံးပြုပါကအနည်းဆုံးအပ်ငွေများသည်ဒေါ်လာ ၅၀ သာဖြစ်သည်။
Ethereum CFD ဆိုတာဘာလဲ။
Ethereum CFD ကိုဝယ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမပိုင်ဆိုင်ဘဲ cryptocurrency ကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သြဇာသက်ရောက်ခြင်း၊ တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်ပါဝင်ခြင်းနှင့်အလွန်နည်းသောကော်မရှင်များတွင်ကုန်သွယ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ CFDs သည်သင်၏ Ethereum ကုန်သွယ်ရေးအမြတ်များကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ငွေထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ငါ Ethereum 24/7 ရောင်းဝယ်နိုင်သလား?
ဟုတ်ပါတယ်, Ethereum ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်များ - နှင့်ဤကိစ္စအတွက် cryptocurrencies, 24/7 ပွင့်လင်းဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အလုပ်ချိန်အတွင်းတနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားသောရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင်ကွင်းနှင့်မတူပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်သည် ETH / USD တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပေးခြင်းအားဖြင့် Ethereum ကိုတိုစေနိုင်သည်။ CFD မှတဆင့်သင်ဤအရာကိုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ညအိပ်ရန်ငွေကြေးကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
ငွေများကို Ethereum ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းထဲသို့မည်ကဲ့သို့သွင်းရမည်နည်း။
အကယ်၍ ထိန်းညှိထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုလျှင်၊ သင်သည်ဘဏ်စာရင်း / အကြွေးသို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အချို့သော Ethereum ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များက e-wallets များကိုပင်ထောက်ပံ့သည်။